Politika momba ny tsiambaratelo - Mpanamboatra Million
Azafady mba jereo eto ambany ny politika manokana momba ny fiainana manokana MillionMakers.com ("Politika momba ny tsiambaratelo").
Ny tanjon'ny politikantsika manokana dia ny manazava mazava amin'ny teny tsotra ary amin'ny fomba fohy sy mangarahara ary azo ekena, ny fomba fitantanana ny angon-drakinao manokana. Ny angon-drakitra manokana dia azo alaina ao anatin'ny rafitry ny fanaterana serivisy, fizotran'ny fifidianana, fandraisana ny serivisy nomen'ny anao na raha mitantana izany data izany izahay rehefa mitsidika ny tranokalanay. Ny politika ataontsika dia miantoka ny fiarovana ny zonao, ny tsiambaratelo ary ny fiarovana ny vaovao izay natolotrao anay, araky ny adidy ara-dalàna mihatra amin'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana ary indrindra indrindra, amin'ny fanarahana ny adidy ho an'ny fangaraharana. Amin'ny tranga miavaka, azonay ampiasaina ny angon-kaontinao manokana ho an'ny fampiharana na ny fiarovana ny zon'ny raharaha ara-dalàna.
Azontsika atao ny mizara ny kaontinao manokana amin'ny
Ny orinasanay vondrona.
Fitantanan-draharaham-panjakana sy vatan'olona rehefa takian'ny hetra, asa, fiarovana sosialy na lalàna hafa azo ampiharina.
Ny mpampiasa mety, ny masoivoho mpitrandraka, ny mpiara-miombon'antoka fahatelo, birao fampandrenesana ny asa ary ny mpampitambatra ho an'ny asa dia hampitombo ny mety ho vitanao amin'ny fahazoana ny paikady matihanina.
Orinasa miandraikitra ny fanodinana angon-drakitra, toy ny mpamatsy tolotra manome tolotra ho antsika mpanolotsaina ivelany sy mpanolotsaina matihanina, mpisolovava, mpanamarin-kaonty, mpanadihady, banky / andrim-panjakana, manam-pahaizana manokana momba ny solosaina, mpandraharaha mifindra monina, takelaka fanamarihana, fahazoan-dàlana ary famonoana heloka bevava rehefa mitsangana izy ireo mifanaraka amin'ny lalàna.
Ny famindrana angon-dresaka iraisam-pirenena dia mety hisy ihany koa ny hetsika teo aloha izay hanarahantsika ny APP, ny fehezan-dalàna mifehy ny fifanarahana nalamin'ny Vaomiera Eropeana sy ny Shield an'ny EU-USA Voaro mba hiantohana ireo famindrana ireo any amin'ireo firenena tsy manana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany. avy amin'ny vaomiera eropeana. Na izany na tsy izany, ny ankolafy fahatelo izay ifampizarana angon-drakitra manokana momba ny toetrany manokana dia hanamafy ny fandraisana ny fepetra ara-teknika sy fandaminana izay mifanaraka amin'ny fiarovana azy.
Ny famoahana dia ataonay amin'ny tsiambaratelo na amin'ny alàlan'ny lalàna. Izahay dia manao dingana mandanjalanja mba hiantohana fa ny antoko fahatelo ampahafantarinay ny mombamomba ny tena manokana dia mitazona ny fampahalalana anao manokana mifanaraka amin'ny GDPR sy ny lalàna momba ny tsiambaratelo.
Fiarovana ny data momba anao manokana
Izahay dia mandray ny fepetra ara-teknika sy fandaminana ilaina mba hitazomana ny haavon'ny fiarovana sy ny tsiambaratelo momba ny fizarana data manokana ary toy izany koa, nametraka rafitra ilaina mba hialana amin'ny tsara indrindra vitantsika, fampiasana tsy ara-dalàna, fidirana tsy nahazo alàlana, fanovana tsy ara-dalàna, fanesorana ary fahaverezan'ny data
Io politika momba ny fiainana manokana io dia mihatra www.tonkatsers.com, izay trano ary tantanin'ny MM LLC. Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia mamaritra ny fomba hanangonantsika sy hampiasantsika ireo mombamomba ireo atolotrao ao amin'ny tranokalanay. Izy io dia milazalaza ny safidy azonao aminao momba ny fampiasana ny mombamomba anao manokana ary ny fomba ahafahanao miditra sy manavao izany fampahalalana izany.
1. Fanangonam-baovao sy fampiasana
Manangona ireto fampahalalana manokana anao ireto izahay.
Fampahalalana ifandraisana, toy ny anaranao, adiresy mailaka, adiresy mailaka ary laharana finday.
Fampahalalana momba ny volavolan-dalàna, adiresy fonenana ary adiresy faktiora.
Fampahalalana momba ny orinasanao, toy ny anaran'ny orinasa, adiresy, karazan'asa ary tompona / mpahazo tombony.
Ny fampidirana nampidirinao ho an'ny tranokalan'ny asa, voasokajy, tambajotra sosialy, trano fonenana ary serivisy hafa dia an'ny safidinao manokana ary tsy mandray andraikitra amin'izany izahay.
Azontsika atao ny manangona fampahalalana manokana an'ny ankolafy fahatelo rehefa ampiana ny anaran'ireo mpividy, mpivarotra, mpanome tolotra, mpandray anjara na mpahazo tombontsoa amin'ny taratasy fandaharana ataonay. Ny fanangonana ny mombamomba ny ankolafy fahatelo dia mety ilaina amin'ny fizarana sy ny fisoratana anarana ho an'ny vokatra na serivisy sasany. Tsy hampiasa izany fampahalalana izany izahay ho an'ny tanjona ara-barotra hafa. Ireo antoko fahatelo ireo dia mety hifandray aminay amin'ny info@millionakers.com mba hangatahanay ny hanalàna izany fampahalalana izany ao amin'ny pejinay.
Ampiasainay ny fampahalalana azonay:
Tanteraho ny baikonao.
Mandefasa fanamafisana baiko ianao.
Diniho ny filan'ny orinasanao mba hamaritana vokatra mety.
Alefaso aminao ny vokatra na fampahalalana nateraka.
Mamaly ny fangatahana serivisy ho an'ny mpanjifa.
Mandefa serasera aminao.
Manaova ny fahazotoany.
Mamaly ny fanahianao sy ny fanontanianao.
2. Fizarana fampahalalana
Izahay dia / hizara ny mombamomba anao amin'ny ankolafy fahatelo amin'ny fomba voalaza ao anatin'ity politika momba ny fiainana manokana ity. Tsy mivarotra ny mombamomba ny mpanjifa mihitsy izahay amin'ny antoko fahatelo.
Azontsika atao ny manome ny mombamomba anao manokana amin'ireo orinasa izay manolotra serivisy hanampiana anay amin'ny asan'ny raharaham-barotra (ohatra; fanodinana ny fandaharana / fandoavanao, serivisy fifindra-monina, serivisy visa, fahazoan-dàlana, consultant fanabeazana, fividianana / fivarotana orinasa efa misy, fisoratana anarana ny orinasanao, fahazoan-dàlana, fanokafana ny kaonty banky, kaonty outsourcing na amin'ny fanomezana ny serivisy ho an'ny mpanjifa). Ireo orinasa ireo dia nahazo alalana hampiasa ny fampahalalana manokana anao raha tsy ilaina amin'ny fanomezana ireo serivisy ireo.
Ny sasany amin'ireo pejinay dia mampiasa “teknikan'ny fanamboarana” hanaterana atiny sy avy amin'ireo mpanome serivisy anay (toy ny mpanodin-bola) ary mitahiry ny fijery sy ny fahatsapan'ity tranonkala ity. Fantaro azafady fa manome ny mombamomba anao amin'ireo antoko fahatelo ireo ianao fa tsy www.millionakers.com.
Azontsika atao koa ny manambara ny mombamomba anao manokana:
Araka ny takin'ny lalàna, toa ny fanarahana kijakozy, na ny dingana ara-dalàna mitovy.
Rehefa mino izahay, am-pinoana tsara, ilaina ny fanambaràna dia ny miaro ny zontsika, miaro ny fiarovana na ny fiarovana ny hafa ianao, manadihady hosoka na mamaly ny fangatahan'ny governemanta.
Raha voarohirohy amin'ny fampifangaroana, fividianana, na fivarotana ny fananana rehetra na ampahany amin'ny fananantsika isika (amin'izany dia hampahafantarina anao amin'ny alàlan'ny mailaka sy / na fampandrenesana fanta-daza amin'ny tranokalanay momba ny fiovana amin'ny fananana na ny fampiasana ny mombamomba anao manokana. , koa, ny safidy mety hanananao momba ny mombamomba anao).
Ho an'ny antoko fahatelo hafa, miaraka amin'ny fankatoavanao mialoha.
Manolo-tena izahay ny hanome ny fiarovana avo indrindra ho an'ny fiarovana sy ny fiainana manokana. Ny hetsika rehetra an-tserasera, ao anatin'izany ny fanodinana ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit dia tanterahana am-pahatokiana amin'ny alàlan'ny teknolojia, tohanan'ny browser-nao, izay mameno ny fampahalalana rehetra alefa aminay. Izahay dia mandray ny fepetra rehetra mba hiarovana ny mombamomba anao amin'ny fahaverezanao, ny famoahana, ny fidirana tsy nahazoana lalana, ny fampiasana diso, ny fanovana na ny fanimbana ary tsy hitahiry ny mombamomba anao fotsiny ho an'ny tanjona nomenanao anay.
Fanambarana GDPR (General Data Protection Regulation)
Mba hiarovana ny mombamomba anao manandanja, ny angona rehetra voatahiry ao amin'ny tahirinay, na an-tserasera na an-tserasera, dia ho voaro arakaraka ny GDPR an'ny EU (Rohy momba ny fiarovana ny angona ankapobeny ho an'ny lalànan'ny Vondrona eropeana), izay manan-kery tanteraka amin'ny 25 mey 2018.
Tsy manangona sy mizara data ny MM LLC raha tsy omena an-tsitrapo omena anao. Izahay dia manome toky fa hanaraka ny fenitry ny fiarovana iraisam-pirenena sy ny fiarovana ny fiainana manokana.
Izahay dia mandefa anao ny mombamomba indrindra momba ny serivisy misahana ny fifindra-monina, ny Serivisy momba ny fanabeazana, ny serivisy amin'ny asa fanompoana, ny hetra sy ny fanadihadihana, ny tombontsoan'ny orinasa, noraisin'ny ekipa matihanina nanolo-tena, izay olona manome lanja ny fiainana manokana.
4. Fanaraha-maso / teknolojia fanaraha-maso
Ny cookie dia rakitra an-tsoratra kely izay voatahiry ao amin'ny solosain'ny mpampiasa ho fitahirizana rakitra. Mampiasa cookies amin'ny tranokalanay izahay. Izahay dia tsy mampifandray ny fampahalalana notehirizinay tao anaty cookies amin'ny fampahalalana fantatrao manokana izay arosonao mandritra ity tranokala ity.
Izahay dia mampiasa mofomamy ID sy fivoriana maharitra mba hanarahana ny fihetsiky ny mpampiasa sy hitahirizana ny vaovao napetrakao tao amin'ny endrinay. Tapitra ny cookie ID session rehefa manidy ny browser-nao. Ny cookie maharitra dia mijanona ao amin'ny kapila mangirana mandritra ny fotoana maharitra. Azonao esorina ny cookies maharitra raha manaraka ny torolàlana omena ao amin'ny lahatahiry "fanampiana" amin'ny Internet browser ianao. Raha mandà ny cookies ianao dia mety mbola mampiasa ity tranokala ity ihany, saingy voafetra ny fahafahanao mampiasa faritra sasany amin'ny tranokalanay.
Fikarohana / fanarenana indray
Miara-miasa amin'ny tambajotra doka misy antoko fahatelo izahay raha te hampahafantatra ny dokam-barotra amin'ny tranonkalantsika na hitantana ny dokam-barotra amin'ny tranonkala hafa. Ny mpiara-miasa amin'ny tambajotra doka amin'ny Internet dia mampiasa mofomamy sy raokao amin'ny Internet mba hanangonana vaovao tsy fantatra momba ny hetsika ataonao ao amin'ny tranokalanay sy tranonkala hafa, mba hanomezana anao dokam-barotra mifototra amin'ny tombontsoanao.
Beacon / gif amin'ny tranokala
Mampiasa teknolojia rindrambaiko antsoina hoe gifs mazava (aka web beacons) izahay hanampiana anay hitantana tsara ny atiny ao amin'ny tranonkalantsika amin'ny fampahafantarana anay izay atiny mahomby. Clear gifs dia sary bitika miaraka amina identifier tsy manam-paharoa, mitovy amin'ny asany amin'ny cookies ary ampiasaina hanarahana ny fivezivezena an-tserasera ataon'ireo mpampiasa tranonkala. Mifanohitra amin'ny cookies, izay voatahiry ao anaty kapila mangirana solosainan'ny mpampiasa, ny gif mazava dia ampidirina tsy hita maso amin'ny pejin-tranonkala ary sahala amin'ny haben'ny fijanonana feno amin'ny faran'ny fehezanteny ity. Izahay dia tsy mamatotra ny fampahalalana nangonin'ny gif mazava tsara amin'ny fampahalalana fantatry ny mpanjifanay manokana.
Rakitra anal / log /
Manangona ny fampahalalana vitsivitsy ho azy isika ary mitahiry azy amin'ny rakitra hazo. Ity fampahalalana ity dia misy ny adiresy Internet protokolonao (IP), karazana navigateur, mpanome serivisy amin'ny Internet (ISP), pejika / fivoahana pejy, rafitra fiasana, takelaka daty / fotoana ary data tahiry.
Mampiasa izany fampahalalana izany izahay, izay tsy mamantatra ireo mpampiasa manokana, mba hamakafaka ny fironana, hitantana ny tranokala, manara-maso ny hetsiky ny mpampiasa manodidina ny tranonkalantsika ary manangona fampahalalana demografika momba ny fototry ny mpampiasa anay. Izahay dia tsy mampifandray ireo angon-drakitra voaangona ho an'ny mombamomba azy manokana.
Tsy tafiditra amin'ity politika momba ny fiainana ity ny fampiasana ireo teknolojia fanaraha-maso ataon'ireo mpamatsy serivisy, mpiara-miasa amin'ny teknolojia na fananan'olon-kafa hafa ao amin'ny tranokalantsika (toa ireo tafiditra amin'ny fanenjehana ny fahombiazan'ny dokambarotra). Ireo antoko fahatelo ireo dia mety mampiasa mofomamy, gif mazava, sary ary sora-tanana mba hanampiana azy ireo hitantana tsara ny votoatiny amin'ity tranonkala ity. Tsy azonay atao ny mifehy na manara-maso ireo teknôlôjia ireo. Tsy mampifamatotra ireo mombamomba ireo antokon'olona fahatelo ireo izahay amin'ny mombamomba ny mpanjifa na mpampiasa.
Ny fiarovana ny mombamomba anao manokana dia tena zava-dehibe ho anay. Rehefa miditra amin'ny mombamomba anao ianao (toy ny carte de crédit, banky kaonty na fampahalalana momba ny raharaham-barotra) amin'ny fahazoan-dàlana dia ataonay ny fandefasana izany fampahalalana izany amin'ny alàlan'ny teknolojia socket layer (SSL) azo antoka.
Manaraka ny fenitra ekena isika matetika amin'ny fiarovana ny fampahalalana manokana natolotra anay, mandritra ny fifindrana ary rehefa mandray izany isika. Saingy, tsy misy fomba fampitana amin'ny Internet na fomba fitahirizana elektronika, azo antoka 100%. Noho izany, tsy azontsika antoka ny fiarovana tena. Raha manana fanontaniana momba ny fiarovana amin'ny tranokalanay ianao dia afaka mifandray aminay info@millionakers.com.
6. Fampahalalana fanampiny
Rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo
Ity tranonkala ity dia misy rohy mankany amin'ny tranokala hafa izay tsy mitovy amin'ny anay ny fanaony manokana. Rehefa mametraka fampahalalana manokana amin'ny iray amin'ireo tranonkala ireo ianao, ny fampahalalana anao dia fehezin'ny politikany manokana. Mampirisika anao izahay mba hamaky tamim-pitandremana ny politikam-panao momba ny tranokala izay vangianao.
Ny tranokalanay dia misy fampisehoana haino aman-jery sosialy (ohatra, facebook, twitter, sns izay voalaza ao amin'ny tranokalanay sy ireo widgets toy ny bokotra "Hizara Ity") na programa kely mifampiresaka. Ireo endri-javatra ireo dia mety manangona ny adiresy IP anao sy ny pejy izay tsidihinao amin'ity tranokala ity, ary mety hametraka cookie iray ahafahan'ny fiasa miasa tsara. Ny fampiasa sy ny haino aman-jery sosialy dia alain'ny antoko fahatelo na hampiantrano mivantana ao amin'ny tranonkalantsika. Ny fifandraisanao amin'ireto endri-javatra ireto dia fehezin'ny politikan'ny tsiambaratelon'ny orinasa manome azy ireo.
Azontsika atao ny maneho fijoroana ho vavolombelona manokana an'ny mpanjifa afa-po, ankoatra ny fanohanana hafa, ao amin'ny tranokalanay. Ireo fijoroana ho vavolombelona ireo dia nalaina avy amin'ny mpamatsy serivisy fahatelo, izay mety hangataka ny mombamomba anao manokana, ao koa ny anaranao sy ny adiresy mailaka. Na dia tsy mandefa ny mombamomba manokana momba ity tranokala ity aza izahay, raha te hanavao na mamafa ny fijoroanao ho vavolombelona ianao, dia iangaviana ianao hifandray amin'ny mpaninjara ny data.
Azontsika atao ny manavao ny politika momba ny tsiambaratelo mba hisarihana ny fiovan'ny fomba fanaovan-tserasera. Raha manao fiovana ara-pitaovana izahay, dia hampahafantarinay anao amin'ny alàlan'ny fampandrenesana amin'ity tranokala ity alohan'ny hanovana ny fiovana. Mampirisika anao izahay hamerina hijery tsindraindray ity pejy ity momba ny fampahalalana farany momba ny fanaonay manokana.
Fanamarihana* Amin'ny maha-politika antsika dia tsy mizara na mivarotra ny angon-drakitra an'ny mpanjifantsika amin'ny fety fahatelo izahay, mandra-pahatongan'ny hoe raha tsy mifidy ny serivisy, dia amin'ny alàlan'ny mpiara-miasa, mpiara-miasa, mpamatsy serivisy. Ny antsipirihany dia nohazonina ho tsiambaratelo toy ny ao amin'ny politikantsika manokana.
Amin'ny maha mpiara-miasa iraisam-pirenena dia manome hery ny mpanjifanay hitombo haingana kokoa isika
be lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny fanitsiana anao amin'ny làlanao fitomboana.